रामप्रसाद २५ दिन हिरासतमा बस्ने – Chitwan Post
रामप्रसाद २५ दिन हिरासतमा बस्ने
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरण
भरतपुर । कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणका ११ आरोपितमध्ये पक्राउ परेका आरोपी रामपसाद अधिकारी २५ दिनसम्म नै प्रहरीको हिरासतमा बस्ने भएका छन् । प्रहरीले आरोपितलाई अधिकतम २५ दिनमात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
अधिकारीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न चितवन प्रहरीले बिहीबार जिल्ला अदालतबाट थप पाँच दिनको म्याद पाएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले यसअघि दुई पटक १०÷१० दिनको म्याद पाएको थियो । यो पटक थपिएको म्याद अन्तिम हो ।
घटनामा संलग्न भएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ११ जनाविरूद्ध उजुरी परे पनि रामप्रसाद मात्रै समातिएका छन् । अधिकारी काठमाडौँबाट भदौ २१ गते समातिएका थिए । घटनामा संलग्न रहेको अन्य आरोपी हालसम्म समातिएका छैनन् । आरोपित नसमातिएको भन्दै मृतकका दाजु नुरप्रसादले तत्काल समाउन प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारीको माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका बेला चितवन रत्ननगरमा विसं. २०६१ सालको जेठ २४ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेको थिए । जयमंगलमा रहेका हजुरबा र आमालाई भेट्न आएका कृष्णलाई सुराकीको आरोपमा हत्या गरेको माओवादीले बताएको थियो ।
हत्या लगत्तै जेठ २६ मा दोषी पहिचान गरी कारबाही गरी पाउँ भनेर कृष्णका बुबा नन्दप्रसादले चितवन प्रहरीमा उजुरी दिए । त्यस्तै, विसं. २०६२ सालको मंसिर २६ मा नुरप्रसाद अधिकारीले आफ्नो भाइको हत्यामा संलग्न हुनेहरु ११ जनाको नाम नै किटान गरेर चितवन प्रहरीमा उजुरी दिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सशस्त्र संघर्षमा भएको घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन नहुने निर्णयपछि बन्द रहेको अनुसन्धान प्रक्रिया कृष्णका बाबुआमाको लगातारको अनसनपछि फेरि सुरू भएको हो । चितवन प्रहरीले आरोपितको खोजी सुरू गर्नका साथै घटना भएको ठाउँ, अधिकारीको गाउँ फुजेल र काठमाडौंसमेत गएर स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो ।
गिरफ्तार भएका आरोपितलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले २५ दिनको मात्रै समय पाउँछ । सो समयभित्र अनुसन्धान पूरा गरेपछि जिल्ला न्यायधिवक्ता (सरकारी वकिल)लाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा कसुर विवरण, प्रमाण र आरोपितहरुलाई हुने सजाय माग गरेर सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छन् ।
मुद्दा दर्ता भएपछि आरोपितलाई थुनामा राख्न जेल पठाउने या तारेखमा छाड्ने भन्ने विषयमा बहस र आदेश हुन्छ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बेलासम्म पक्राउ नपरेका आरोपितहरु मुद्दा दर्ता भएपछि ७० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सक्छन् । अदालतले उनीहरुलाई थुनामा राख्न कारागार पठाउने या तारेखमा छाड्ने भन्ने बारे आदेश दिन्छ । प्रहरीको हिरासतमा बस्नु पर्दैन ।
‘७० दिनको म्याद सकिएपछि वारेण्ट जारी गर्छ । ७० दिनभित्र देखा परे पनि प्रहरीले नसमात्न सक्छ, तर वारेण्ट जारी भएपछि जहाँ देख्यो त्यही समाएर प्रहरीले अदालतमा बुझाउनुपर्छ’ अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटाले भने । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशन अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढे पनि माओवादी नेतृत्वले अनुसन्धान रोक्न दबाब मूलक अभियान नै सुरू गरेको छ ।
बिजुलीको तारमा परी मृत्यु
कार्यकारी निर्देशकविरूद्ध खनिए डा.भक्तमान